ဒလတံတား စီမံကိန်း စတင်ဆောက်လုပ် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၈ –
ဒလတံတားစီမံကိန်းကို ချဉ်းကပ်လမ်း ပိုင်တူးခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် ဇွန် ၂၈ နံနက်ပိုင်းက စတင်ခဲ့သည်။ ”ဒလဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ပထမဆုံး A-1 ဘိုးပိုင်စိုက်တဲ့ အခမ်းအနားပါ။ ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးနဲ့ ကိုရီးယားသံအမတ်ကြီးတို့ လာရောက်ပြီး ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။ ရန်ကုန်ဘက်ကမ်းကတော့ ရှင်းလင်းရေး တွေလုပ်ပြီးမှသာ စိုက်လို့ရမယ်။ ပြည်သူက တော့ ကြာမယ်လို့ထင်တာပေါ့။ အချိန်ဇယား အတိုင်း လုပ်နေပါတယ်”ဟု ဒလတံတား တည်ဆောက်ခွင့် ကန်ထရိုက်ရရှိသည့် မြတ် နိုးသူကုမ္ပဏီမှ တွဲဖက်မန်နေဂျာ ဦးမောင် မောင်ဆွေက သတင်းမီဒီယာများကို ပြော သည်။
ဘိုးပိုင်မစိုက်ထူမီ အများပြည်သူသွားလာနိုင်ရေးအတွက် ဘေးမှလမ်းများနှင့် မြောင်းများကို အရင်ဆောင်ရွက်ရကြောင်း၊ အားလုံးပြီးစီး၍တင်ပြပြီးမှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကဆိုသည်။
”ဒါတွေအားလုံး အဆင်ပြေတော့မှ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုမှ ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ ဆောက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီဘက်အခြမ်းမှာ ဘိုးပိုင်တူးတယ်။ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေအားလုံး တင်ပေးရတယ်။ တံတားဆောက်မယ့်ကြေညာချက်တွေ ပြင်ရတယ်။ အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြီးရင် ဟိုဘက်ကနေ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုမှ ကျွန်တော်တို့က လုပ်ငန်းကစလို့ရတာ”ဟု ဦးခင်မောင် ဆွေက ပြောသည်။
လုပ်ငန်းကာလမှာ ယခင်က သတ် မှတ်ထားသည့် အတိုင်းပါ ၄၁ လနှင့်ပြီး အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”မိုးတွင်းဆိုပေမယ့် ဘိုးပိုင်လုပ်ငန်းက အခုလုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ တိုင်တစ်လုံး ကို ဒီနေ့တူးတယ်။ နောက်နေ့ကျရင် ပြန်ချဉ်းကပ်မယ်။ ကွန်ကရစ်လောင်းမယ်။ သူလုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ သွားမှာပါ။ မိုးတွင်းလည်း လုပ်လို့ရပါ တယ်။ ဘိုးပိုင်တူးတာကတော့ကာလအနေ နဲ့ သတ်မှတ်လို့မရဘူး။ တစ်တိုင်ပြီးတစ်တိုင် ဆက်သွားမှာပါ။ A-1 တူးမယ်။ A-1တူး ပြီးရင် B-1? B-2? B-3 ဆက်သွားမှာပါ”ဟု ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
မြန်မာ-ကိုရီးယား ချစ်ကြည်ရေး တံတား(ဒလတံတား) စီမံကိန်းသည် ရန်ကုန် မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ဘုန်းကြီးလမ်းနှင့် ဒလမြို့ ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းကို ဆက်သွယ်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကာ တံတားတည်ဆောက်မှုအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း ၁၆ဝ ကျော်လျာထားကြောင်း ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (EDCF)ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၇ သန်းကျော်နှင့် ပြည်တွင်း လိုအပ်ရန်ပုံငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃ဝ ကျော်လျာထားကြောင်း သိရသည်။
ဒလတံတားပန္နက်တင် အခမ်းအနားကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်က တက်ရောက်ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့သည်။
”ကာရိုက်တာတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ရင်ဘတ်ထဲကသိဖို့အတွက် စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်” သရုပ်ဆောင် ဒေါင?